Google विश्लेषण गर्न निरपेक्ष शुरुवात गाइड - चीन Litbright मोमबत्ती (शीजीयाजूआंग)
चर्च / स्तंभ मोमबत्ती
सजावट मोमबत्ती / कला मोमबत्ती
Google विश्लेषण गर्न निरपेक्ष शुरुवात गाइड
Google विश्लेषण के छ तपाईंलाई थाहा छैन, आफ्नो वेबसाइट मा स्थापित गरेका छैनन्, वा यसलाई स्थापित तर हेर्न कहिल्यै आफ्नो डाटा मा, त्यसपछि यो पोस्ट तपाईं लागि हो। यसलाई विश्वास गर्न धेरै गाह्रो हुँदा, त्यहाँ अझै पनि आफ्नो ट्राफिक मापन गर्न Google विश्लेषक प्रयोग गरिएका छैन (या कुनै पनि विश्लेषण गर्ने कुरा को लागि,) वेबसाइट छन्। यो पोस्ट मा, हामी दृश्य निरपेक्ष शुरुवात गरेको बिन्दुबाट Google विश्लेषण हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ। किन आवश्यक छ, यो प्राप्त गर्न कसरी, कसरी यसको प्रयोग गर्न, र workarounds साधारण समस्या छ।
हरेक वेबसाइट मालिक Google विश्लेषण किन आवश्यक छ
तपाईं ब्लग छ? तपाईं एक स्थिर वेबसाइट छ? जवाफ तिनीहरूले व्यक्तिगत वा व्यवसाय प्रयोगको लागि हो कि, हो हो भने, त्यसपछि तपाईं Google विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। यहाँ आफ्नो वेबसाइट बारेमा धेरै प्रश्न को केही तपाईं Google विश्लेषण प्रयोग गरेर जवाफ दिन सक्नुहुन्छ कि छन्।
कति मानिसहरू मेरा वेबसाइट भ्रमण?
मेरो आगंतुकों कहाँ बस्छौ?
म एक मोबाइल-मैत्री वेबसाइट चाहिन्छ?
के वेबसाइट मेरो वेबसाइटमा यातायात पठाउन?
के मार्केटिङ रणनीति मेरो वेबसाइटमा सबैभन्दा यातायात ड्राइव?
मेरो वेबसाइटमा जो पृष्ठ सबैभन्दा लोकप्रिय छन्?
म सुराकी वा ग्राहकहरु मा कति आगंतुकों परिवर्तित छ?
मेरो परिवर्तित आगंतुकों कहाँबाट र मेरो वेबसाइटमा गयौ?
म मेरो वेबसाइटको गति कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ?
के ब्लग सामग्री सबैभन्दा जस्तै मेरो आगंतुकों के?
त्यहाँ धेरै, धेरै अतिरिक्त Google विश्लेषण जवाफ दिन सक्नुहुन्छ कि प्रश्न छन्, तर यी सबैभन्दा वेबसाइट मालिकहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो कि हुन्छन्। अब तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा Google विश्लेषण प्राप्त गर्न सक्छन् कसरी हेरौं।
Google विश्लेषण कसरी स्थापना गर्न
पहिलो, तपाईंले एक Google विश्लेषण खाता चाहिन्छ। तपाईंलाई जीमेल, गुगल ड्राइभ, Google पात्रो, Google+, वा YouTube जस्तै अन्य सेवाहरू लागि प्रयोग प्राथमिक गुगल खाता छ भने, त्यसपछि तपाईं गुगल खाता प्रयोग गरेर आफ्नो Google विश्लेषण सेट अप गर्नुपर्छ। वा तपाईंले एउटा नयाँ सिर्जना गर्न आवश्यक हुनेछ।
यो तपाईं सधैंभरि राख्न योजना Google खाता हुनुपर्छ र तपाईंले मात्र पहुँच छ। तपाईं सधैं सडक तल अन्य मानिसहरूलाई आफ्नो गुगल एनालाइटिक्स पहुँच प्रदान गर्न सक्छ, तर तपाईं अरू कसैले यो भन्दा बढी पूर्ण नियन्त्रण गर्न चाहँदैनन्।
ठूलो टिप: आफ्नो जो कोहीले (आफ्नो वेब डिजाइनर, वेब डेभलपर, वेब पाहुना, एसईओ व्यक्ति, आदि) आफ्नै गुगल खाता अन्तर्गत आफ्नो वेबसाइटको Google विश्लेषण खाता त्यसैले तिनीहरू तिमी यसलाई "प्रबन्ध" गर्न सक्नुहुन्छ सिर्जना गरौं छैन। तपाईं र यो व्यक्ति भाग तरिका, तिनीहरूले आफ्नो गुगल एनालाइटिक्स डाटा हुनेछ, र यदि तपाईं सबै सुरु हुनेछ।
तपाईंको खाता र सम्पत्ति सेट अप
तपाईँ Google खाता, तपाईं Google विश्लेषण गर्न जाने र साइन Google विश्लेषण बटन मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं त तपाईं Google विश्लेषण सेट अप गर्न लिनुपर्छ तीन कदम संग अभिवादन गरिनेछ।
तपाईं साइन अप बटन क्लिक गरेपछि, तपाईंले आफ्नो वेबसाइट लागि जानकारी भर्न हुनेछ।
Google विश्लेषण तपाईंको खाता व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रदान गर्दछ। तपाईं एक गुगल खाता अन्तर्गत 100 गुगल विश्लेषक खाताहरू हुन सक्छ। तपाईं एक Google विश्लेषण खाता अन्तर्गत अप गर्न 50 वेबसाइट गुण हुन सक्छ। तपाईं एक वेबसाइट सम्पत्ति मुनि 25 दृश्यहरु हुन सक्छ।
यहाँ केही परिदृश्य हो।
परिदृश्य 1: तपाईं एक वेबसाइट छ भने, तपाईं मात्र एक वेबसाइट सम्पत्ति एक Google विश्लेषण खाता आवश्यक छ।
परिदृश्य 2: तपाईं दुई वेबसाइटहरू, जस्तै तपाईंको व्यापार को लागि एक र आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगको लागि एउटा छ भने, तपाईं दुई खाता सिर्जना गर्न, नामकरण एक "123Business" र एक "व्यक्तिगत" चाहनुहुन्छ सक्छ। त्यसपछि तपाईं 123Business खाता अन्तर्गत तपाईंको व्यापार वेबसाइट र आफ्नो व्यक्तिगत खाता अन्तर्गत आफ्नो व्यक्तिगत वेबसाइट सेट अप हुनेछ।
परिदृश्य 3: तपाईं धेरै कारोबार छ भने, तर 50 भन्दा कम, र तिनीहरूलाई प्रत्येक एक वेबसाइट छ, तपाईं तिनीहरूलाई सबै एक व्यापार खाता अन्तर्गत राख्न चाहनुहुन्छ सक्छ। त्यसपछि आफ्नो व्यक्तिगत वेबसाइट लागि व्यक्तिगत खाता छ।
परिदृश्य 4: तपाईं धेरै कारोबार र तिनीहरूलाई प्रत्येक वेबसाइट दर्जनौँ छ भने, 50 भन्दा बढी वेबसाइट को कुल को लागि, तपाईं यस्तो 123Business खाता, 124Business खाता, यसको आफ्नै खाता अन्तर्गत प्रत्येक व्यापार राख्न चाहनुहुन्छ, र यति मा।
तपाईंको Google विश्लेषण सेट अप गर्न कुनै अधिकार वा गलत तरिकाहरू छन् खाता-यो सिर्फ तपाईं आफ्नो साइटहरु संगठित गर्न चाहनुहुन्छ कसरी एक कुरा हो। तपाईं सधैं सडक तल तपाईंको खाता वा गुणहरू पुन: नामकरण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं एक Google विश्लेषण खाता विशेषता (वेबसाइट) सार्न अर्को-तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ खाता अन्तर्गत नयाँ सम्पत्ति सेट अप र तपाईं मूल सम्पत्ति देखि संकलित ऐतिहासिक डेटा गुमाउनु हुनेछ याद गर्नुहोस्।
निरपेक्ष शुरुवात गरेको पुस्तिका लागि, हामी तपाईँलाई एउटा वेबसाइट र एउटा मात्र दृश्य (पूर्वनिर्धारित, सबै डाटा हेर्नुहोस् जरूरी छ। सेटअप यस जस्तै केहि हेर्न हुनेछ मान जाँदै हुनुहुन्छ।
यो मुनि, तपाईंले आफ्नो गुगल एनालाइटिक्स डाटा साझेदारी गर्न सकिँदैन जहाँ कन्फिगर गर्न विकल्प हुनेछ।
आफ्नो ट्र्याकिङ कोड स्थापना
एक पटक तपाईं समाप्त, तपाईं प्राप्त ट्र्याक आईडी बटन क्लिक गर्नुहोस् हुनेछ। के तपाईं गर्न सहमत छन् जो Google विश्लेषण सर्तहरू र, एक पपअप प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि तपाईं आफ्नो Google विश्लेषण कोड प्राप्त हुनेछ।
यो आफ्नो वेबसाइट हरेक पृष्ठमा स्थापना गरिनु पर्दछ। स्थापना तपाईं वेबसाइट कस्तो निर्भर हुनेछ। उदाहरणका लागि, म मेरो आफ्नै डोमेन उत्पत्ति फ्रेमवर्क प्रयोग एक WordPress वेबसाइट छ। यो रूपरेखा मेरो वेबसाइटमा हेडर र फुटर लिपि थप्न विशिष्ट क्षेत्र छ।
वैकल्पिक रूपमा, तपाईँले आफ्नै डोमेनमा एक WordPress छ भने, तपाईं Google विश्लेषक Yoast प्लगइन द्वारा सजिलै कुनै कुरा तपाईं प्रयोग गर्दै कुन विषय वा रूपरेखा आफ्नो कोड स्थापना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं HTML फाइलहरू निर्माण एक वेबसाइट छ भने, तपाईं </ टाउको> तपाईँको पृष्ठ को प्रत्येक मा ट्याग अघि ट्रयाकिङ कोड थप्नेछ। तपाईं एउटा पाठ सम्पादक कार्यक्रम (जस्तै म्याक लागि TextEdit वा Windows को लागि नोटप्याड) को प्रयोग गरेर र त्यसपछि एक एफटीपी कार्यक्रम (जस्तै asFileZilla) को प्रयोग गरेर आफ्नो वेब होस्ट फाइल अपलोड गरेर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं एक Shopify ई-वाणिज्य स्टोर छ भने, तपाईंले आफ्नो अनलाइन स्टोर सेटिङहरूमा जानुहोस् र निर्दिष्ट जहाँ आफ्नो ट्र्याकिङ कोड पेस्ट हुनेछ।
तपाईं tumblr मा एक ब्लग छ भने, तपाईं, तपाईंको ब्लग जाने आफ्नो ब्लग शीर्ष दायाँ मा विषयवस्तु बटन सम्पादन गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि आफ्नो सेटिङमा बस Google विश्लेषक ID प्रविष्ट गर्नुहोस्।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, Google विश्लेषक को स्थापना तपाईँले प्रयोग मंच (सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली, वेबसाइट बनाउने, ई-वाणिज्य सफ्टवेयर, आदि), तपाईँले प्रयोग विषय, र तपाईँले प्रयोग प्लगइन आधारित फरक हुन्छ। तपाईं आफ्नो मंच + कसरी Google विश्लेषण स्थापना गर्न को लागि एक वेब खोजी गरेर कुनै पनि वेबसाइटमा Google विश्लेषण स्थापना गर्न सजिलो निर्देशन पाउन सक्षम हुनुपर्छ।
लक्ष्य सेट अप
तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा आफ्नो ट्र्याकिङ कोड स्थापना पछि, तपाईं एउटा सानो (तर धेरै उपयोगी) कन्फिगर गर्न मा Google विश्लेषण आफ्नो वेबसाइट प्रोफाइल मा सेट चाहनुहुन्छ हुनेछ। यो तपाईंको लक्ष्य सेटिङ हो। तपाईं आफ्नो Google विश्लेषण को शीर्ष मा व्यवस्थापक लिंक मा क्लिक गरेर र त्यसपछि लक्ष्य आफ्नो वेबसाइटको हेर्नुहोस् स्तम्भ अन्तर्गत क्लिक गरेर फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
लक्ष्य Google विश्लेषण भन्नेछु गर्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो वेबसाइटमा भएको छ। उदाहरणका लागि, तपाईं जहाँ तपाईं सम्पर्क फारम मार्फत सुराकी उत्पन्न वेबसाइटमा छ भने, तपाईं फेला पार्न (वा सिर्जना) आगंतुकों एक पटक तिनीहरूले सम्पर्क जानकारी पेश गरेका छन् मा अन्त एक धन्यवाद पृष्ठ चाहनुहुन्छ हुनेछ। वा, तपाईं एक वेबसाइट जहाँ तपाईं उत्पादनहरू बेच्न छ भने, तपाईं फेला पार्न (वा सिर्जना) अन्तिम तपाईं वा आगंतुकों मा भूमि गर्न एक पटक तिनीहरूले खरीद पूरा गरेको छ लागि पुष्टि पृष्ठ धन्यवाद चाहनुहुन्छ हुनेछ।
पोस्ट समय: अगस्ट-10-2015
RM 702, Bldg, एक Lingshi Comm.Bldg।, NO.351 दिनेश रोड, शीजीयाजूआंग, Hebei चीन